जातीय मुक्ति कि घृणाको खेती !
विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थाको अवसान गराएपछि अनेकखाले जातीय संस्था, संगठन, मोर्चा तथा राजनीतिक पार्टीका सक्रियताले जातीय आन्दोलनमा प्रशस्त बहस, छलफल तथा अन्तक्रिर्याको थालनी भयो। त्यस यताको समयमा ‘जनजाति’, ‘आदिबासी’ तथा ‘दलित’ शीर्षकमा विविध गतिविधिहरू संख्यात्मक रूपमा बढेका छन्। ‘मधेशी आन्दोलन’ को सन्दर्भ पनि यस कालखण्डमा नेपाली राजनीतिको एक सवालका रूपमा रहिरह्यो। मूलप्रवाहबाट बाहिर पर्न गएका, अवसरहरूबाट वञ्चित समुदायले राज्यका हरेक तहमा भागिदारी खोज्ने जायज मागलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ भन्नेमा मतैक्य बढ्दो छ। यद्यपि यसै सन्दर्भमा नेपाली समाजमा कि त जातीय सवालमा पटक्कै थाहा नभएझैं चुपचाप बसिदिने, कि त्यसलाई अनावश्यक हदसम्म उराल्ने प्रवृत्तिहरू पनि नदेखिएका होइनन् ।
Last Updated on Thursday, 06 January 2011 16:56
मगर राज्य घोषणा भो । बरिष्ठ नेता खपागींले भने भद्र बहिस्कार गरे
तानसेन २५ मंसीर
पाल्पाको सदरमुकाम तानसेनवाट आज मगँरात स्वायत्त प्रदेश घोषणा गरिएको छ । संघले प्रस्तावित गरेको मगरात स्वायत्त प्रदेशको उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत सम्म सिमाना फैलिएको सघंका केन्द्रिय अध्यक्ष झक बहादुर थापाले बताए । संघले प्रस्तावित गरेको मगरात स्वायत्त प्रदेशभित्र पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाची, बाग्लुङ्ग, म्याग्दी, प्युठान, रोल्पाको पुरै भुभाग, सहित रुकुमको ३२ गाविस, सल्यानको ४८ , नवलपरासीको ३७ , तनहुको १९ , स्या«्जनाको ४५ , पर्वतको ३१ , दाङको ५ , कास्कीको १ , रोल्पाको ७ , गोरखाको १२ , र मुस्ताङ्गको ३ गाविस सहित
हालको १८ जिल्ला समेटिएको छ ।
सभा अगाडि विभिन्न मगर सस्कृंती झल्कने झाँकी सहितको र्रयालीले तानसेन बजारको परिक्रमा गरेको थियो । र्यालीपछि आयोजित सभालाई एकिकृत नेकपा माओवादीका महासचिब राम बहादुर थापा बादल, नेपाली काग्रेसका भिम कुमारी बुढा, एमालेका थम माया थापा लगायतका बक्ताहरुले सम्बोधन गरेका छन् ।
यसअघि गएको पुषमा एमाओवादीले ९ जिल्लाको स्वायत्त गणराज्य घोषणा गरेको थियो । त्यो घोषणा पनि राम बहादुर थापाले नै गरेका थिए । अब नेका, एमाले, नेकपा एककिृत जस्ता दलहरुको आ आफ्ना प्रस्ताव अनुसारको मगरात घोषण्ण गर्न बाँकी छ ।
किन आएनन् खपागीं ?
सभालाई सम्बोधनका लागि नेपाल मगरसंघका पूर्व अध्यक्ष तथा राष्टिय जनमुक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष गोरे बहादुर खपागींको नाम पनि ब्यापक प्रचारप्रसार गरिएकोथियो तर उनी कार्यक्रममा आएनन् । उनका एक निकस्टको भनाईमा उनलाई अन्तिम समयमा मात्र कार्यक्रमबारे जानकारी दिइएको थियो । आउने जाने बस्ने र कार्यक्रमको बिस्तृत जानकारी उनलाई दिइएको थिएन । मगरात घोषणा बारे उनीसंग कुनै छलफल पनि गरिएको थिएन ।
आयोजकहरुले मान्छे जम्मा गर्न उनको नाम प्रचारप्रसार गरेपनि उनलाई कार्यक्रमबारे त्यसका अध्यक्ष थापाले गम्भीरतापूर्वक कुनै छलफल नै नगरेको खपागीं निकट ति ब्यक्ति बताउछन् ।
नेपाल मगररसंघले यो कार्यक्रम गर्न एनजिओ आइएनजिओसंग लाखौं रुपैया लिएपनि खपागीं जस्ता बरिष्ठ ब्यक्तित्वलाई कुनै ब्यवस्था गरेकाथिएनन् । ति भन्छन्, 'त्यसैले खपागींज्यूले आफुलाई कार्यक्रममा बोलाएर मानमर्दन गर्न चाहेको गलत नियत प्रस्ट देखिएकोले वहाँ जानु भएन ।'
Last Updated on Saturday, 18 December 2010 04:53
नेपाली भाषा यसर्थ सर्वश्रेष्ठ छ (नयाँ अनुसन्धनात्मक लेख सहित) - डा. माधवप्रसाद पोखरेल
१- नेपाली भाषाका फरक –फरक भूमिका छन् । नेपाली भाषा थुप्रै नेपालीको मातृभाषा हो । जन्मेपछि वोल्ने भाषा हो , वच्चाले आमावाट यही भाषा सिक्छ र पहिलो भाषाको रुपमा यही भाषा नै सिक्छ । त्यसैले पनि यो पहिलो दर्जाको भाषा हो ।
Last Updated on Saturday, 11 February 2012 10:42
पोखरामा हुने चलचित्र, गीतसंगीत र साहित्य संगममा के के हुदैंछ
युवराज मास्की राना मगर-
आदिवासी जनजातिहरू मध्ये जनसंख्याको हिसाबले पहिलो र नेपालको जातिहरूमा तेस्रो स्थान ओगटेका मगर जातिको तीन वटा भाषा रहेका छन् । ती बाह्र मगरात मगर भाषा, अथार मगरात मगर भाषा र काईके मगर भाषा हुन् । कुनै पनि जातिको पहिचान गराउने पहिलो माध्यम नै भाषा हो । जब भाषा लोप हुन्छ तब संस्कृति र जाति पनि लोप हुँदै जान्छ । भाषालाई समृद्ध र सरल बनाउन साहित्यको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सन् २००१ को तथ्याङ्ग अनुसार मगर जातिको जनसंख्या १६,२२,४२१ मध्ये ७।१४ प्रतिशतले मात्र मगर भाषा बोल्ने गरेको पाईन्छ । मातृभाषामा कलम चलाउने मगर साहित्यकार र चलचित्रकर्मीहरूको संख्या नगन्य मात्रामा छन् । त्यसमा पनि ब्यवहारिक ज्ञान लिई चलचित्र निर्माण गर्ने र साहित्य रचना गर्नेहरूको संख्या नगन्य मात्रमा छ । यसले गर्दा गुणात्मक गीत÷संगीत, मगर चलचित्र र साहित्य ९पुस्तक० बन्न निकै धौ धौ परिरहेको छ ।
मगर जाति सम्बन्धी निर्माण गरिएका चलचित्र होस् वा गीत, संगीत तथा लेखनको इतिहास त्यति लामो छैन । मगर समाजमा २०५२ सालमा लङ्घन निर्माण गरि मगर चलचित्रको ईतिहास शुरू भएको छ भने लेखन तर्फ १९९६ सालमा अयोध्या प्रसाद प्रधानले मगर कुरा शिक्षा र मगर व्याकरण तयार गरेका थिए । त्यसपछि २००६-०७ सालमा आदिकवि जीतबहादुर सिंजाली मगर र रेखबहादुर थापा मगरको आगमनले मगर भाषा लेखनमा नयाँ आयाम थप्ने काम भयो । जति पनि चलचित्र, साहित्य र गीतहरू निर्माण भइरहेका छन्, तिनीहरू रहर र भावनामा डुबेर निर्माण भईरहेको छ । त्यसकारण मगर चलचित्र, साहित्य र गीत÷संगीतहरूको बजार पनि सिमित रहेको छ । जसको स्तर पनि त्यति सन्तोषजनक रहेको पाईदैन । त्यसैले गर्दा, मगर जातिको भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा तथा भेष–भूषालाई सही मानेमा बचाई राख्ने कार्य मगर चलचित्र, गीत÷संगीत र साहित्यले गर्ने भएकोले यी क्षेत्रमा स्तरीयताको आवश्यकता पर्दछ ।
मगर चलचित्रकर्मीहरूले विभिन्न क्षेत्र (स्थानीय र केन्द्र) स्तरमा आफ्नो चलचित्रहरू निर्माण गर्दै आई रहेका छन् । यसरी मगर भावना बोकेर मगर चलचित्र, गीत-संगीत तथा साहित्य लेखनमा लागेका मगरहरू बीच चिनजान गराउनुको साथै अझ उत्कृष्ट मगर चलचित्र, गीत-संगीत तथा साहित्य निर्माण गर्न यी व्यक्तिहरूलाई अझ उत्प्रेरित गराउने अभिप्रायले यो कार्यक्रम अपरिहार्य आयोजना गर्नु पर्ने भएको हो । यस कार्यक्रमको आयोजनाले गर्दा भविष्यमा मगर चलचित्र, गीत÷संगीत तथा साहित्य लेखनमा गुणस्तरीय उत्पादन हुने छ । अन्य उद्देश्यहरू ः
विभिन्न स्थानीय स्तरमा रहेका मगर चलचित्रकर्मी, संगीतकर्मी र मगर साहित्यकारहरू बीचमा भातृत्वको भावना जगाई आपसी समन्वयकारी सञ्जाल निर्माण गराउने ।
गुणस्तरीय मगर चलचित्र, गीत÷संगीत र साहित्य पुस्तकहरू निर्माण तथा प्रकाशन गराउन प्रेरित गराउनुको साथै पहिचान दिलाउने छ ।
निर्माण भएका मगर चलचित्र, गीत-संगीत र साहित्यको बजार बिस्तार गर्न मद्दत गर्ने छ ।
मगर चलचित्र, गीत-संगीत र साहित्यहरू उत्कृष्ट बन्न सहयोग मिल्ने छ ।
यस क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूलाई गरिएको सम्मानले नयाँ पुस्तालाई पनि यस क्षेत्रमा लाग्न हौसला मिल्ने छ ।
मगर चलचित्रहरू १६ बर्षको अन्तरालमा लगभग २५-२६ वटा निर्माण भईसकेको छ । चलचित्र सम्बन्धी एकेडेमिक ज्ञान नलिई स्व–अध्ययनद्वारा स्वत स्फूर्त रूपमा मगर चलचित्र निर्माण गर्ने मगर चलचित्रकर्मीहरूको संख्या दिनानुदिन तिब्र गतिमा बढ्ने क्रम जारी छ । तर मगर चलचित्रको स्तर माथि उठ्न सकिरहेको छैन । धेरै जसो मगर चलचित्रहरू सिमित बजारमुखी भएर निर्माण भएका छन् । त्यसले गर्दा पनि चलचित्रको स्तर माथि उठ्न सकेको छैन । यो दोष चलचित्र सम्बन्धी ब्यवहारिक ज्ञान कै कमीले गर्दा हो । यसर्थ यस कार्यक्रमले उत्कृष्ट मगर चलचित्र निर्माण गर्नको लागि समेत प्रेरित गर्ने छ । साथै गीत-संगीत क्षेत्रमा लागेका मगरहरूले समेत समाजमा पहिचान बनाउन सकेको अवस्था छैन् ।
साहित्य लेखनमा लागेका व्यक्तिहरू केवल पहिचानको लागि कृतिहरू प्रकाशन गर्ने गरेको पाइन्छ । अर्थात वहाँहरू नितान्त व्यक्तिगत रूपमा लागेर चलचित्र कर्म, साहित्य कर्म र संगीत कर्ममा लागिरहेको अवस्था छ । यसर्थ वहाँहरूलाई हौसला उजागर गर्दै अझ उत्प्रेरित गर्नकै लागि यो कार्यक्रमको आवश्यकता महसुस गरि आयोजना गर्ने पहल गरिएको हो ।
विभिन्न जिल्लाहरूबाट सहभागी भएका सबै सहभागीहरूले कम्तीमा मगर चलचित्र, गीत÷संगीत र मगर साहित्यकर्मी सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्नेछन् ।
सहभागीहरूले मगर भावना र नीतिमा बनेको चलचित्र, गीत÷संगीत तथा साहित्यबारे थाहा पाउने छन् । यसले चलचित्रकर्मी, साहित्यकर्मी तथा संगीतकर्मीको पनि क्षमता अभिबृद्धि हुनेछ । जसले यस विद्यामा स्तरीयता कायम गर्ने प्रयत्न गर्ने छ ।
विभिन्न जिल्लाका चलचित्रकर्मी, साहित्यकर्मी एवम् संगीतकर्मी एउटै साझा स्थानमा सहभागी हुँदा एक अर्कासँग चिरपरिचित हुने मौका मिल्ने छ । जसले गर्दा आपसी समन्वय गरी मगर सञ्जाल फैलाउनमा मद्दत मिल्ने छ ।
सहभागीहरू बीच एक आपसमा भेटघाट भई परिचित हुने मौका मिल्नेछ । जसले बजार बिस्तार गर्नमा पनि सहयोग पु¥याउने छ ।
सहभागीहरूले मगर चलचित्र, साहित्य र संगीतकर्मीसँग परिचित हुने अवसर प्राप्त गर्ने छन् ।कार्यक्रममा एकल तथा सामुहिक नृत्य, गीत तथा संगीत प्रस्तुत हुने हुँदा आफु भित्र रहेको क्षमता उजागर गर्ने अवसर हुने छ ।
कार्यक्रमको लक्षित समुह
मगरहरूको जनघनत्व भएको जिल्लाहरू (कास्की, स्याङ्जा, पर्वत, पाल्पा, बाग्लुङ, म्याग्दी, चितवन, गोरखा र तनहँु) का मगर महानुभावहरूलाई सहभागी गराईने छ ।
गीत÷संगीत, साहित्य र चलचित्र ज्ञानको भण्डार भएको हुँदा मगर समाजसँग सम्बन्धीत रहेर अध्ययन गर्न चाहने अन्य जात÷जाति पनि यस कार्यक्रममा सहभागी रहने छन् ।
मगरहरू देश भित्र मात्र होइन विदेशमा समेत बसोबास गरिरहेको हुँदा यसको प्रभाव नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा रहेका मगरहरूमा समेत पर्ने छ ।
कार्यक्रममा सम्मानित हुनेहरू
मगर चलचित्रकर्मी, संगीतकर्मी र मगर साहित्यकारहरूलाई पुरस्कृत तथा उहाँहरूको योगदान अनुसार यस कार्यक्रममा सम्मान गरिने छ ।
मुलधारको चलचित्रमा लागेका व्यक्तिहरुलाई सम्मान
मगर चलचित्रकर्मी संघमा दर्ता भएको मगर चलचित्रलाई ताम्रपत्र
मगर चलचित्र तर्फको बिशेष सम्मान १ जना
पुरूष वा महिलाबाट
संगीत तर्फ सम्मान
संगीत तर्फको बिशेष सम्मान १ जना
पुरूष वा महिला
साहित्य तर्फ सम्मान ३ वटा
नवप्रतिभा पुरस्कार ः बाह्र मगरात, अठार मगरात र काइके मगर भाषामा
साहित्य तर्फ बिशेष साहित्य सम्मान ३ वटा
दिर्घजीवि साहित्य सम्मान ः बाह्र मगरात, अठार मगरात र काइके मगर भाषामा
नेपाल मगर महिला संघ
पुन समाज, नेपाल
आदिवासी जनजाति महासंघ, जिल्ला समन्वय समिति, कास्की
विभिन्न स्थानका एफएमहरू (काठमाडौं, पोखरा, तनहुं, नवलपरासी, रुपन्देही)
(लेखक मगर चलचित्रकर्मी संघका अध्यक्ष हुन् । )
Last Updated on Friday, 10 December 2010 08:56
मगरसंघको विवादले रत्यौलीको रुप किन लियो
राजनीतिका कारण दुईटा मगरसंघ खोलिएको रुपन्दहेीमा ज्यान लिने दिने धम्की समेत शुरु हुन थालेकोछ । तर केन्द्रिय समिति मौनब्रत बसेर रमिता हेरिरहेकोछ ।
- गोविन्द घर्ति
Last Updated on Monday, 13 December 2010 09:22
बाघ बचाउन मासिक ३ पाउण्ड तिर्ने कि ?
गोर्खा र तिनका सन्ततिलाई बिदेशी बनाउने षड्यन्त्र
के मातृभाषा भाषाबैज्ञानिकहरुको प्रयोगशाला मात्र हो ? :विष्णुकुमार सिङ्जाली (बहसमा टिप्पणी)
नेपालीको प्राण हो खसभाषा !